Valverde oo cadeeyay go’aankiisa kaga aadan ka qeyb galka Messi ee ciyaarta caawa, isagoo dhinaca kale ka digay halista hal arrin – Gool FM
Valverde oo cadeeyay go’aankiisa kaga aadan ka qeyb galka Messi ee ciyaarta caawa, isagoo dhinaca kale ka digay halista hal arrin
(Barcelona) 17 Sebt 2019.Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa ka hadlay kulanka ay caawa kula ciyaarayaan kooxda Borussia Dortmund tartanka xiisaha badan ee Champions League.
Kooxda Barcelona ayaa caawa marti ku noqon doonta garoonka Signal Iduna Park, si ay u wada ciyaaraan Borussia Dortmund kulankooda daah furka groupka F ee heerka group-yada tartanka Champions League xili ciyaareedkan 2019/2020.
Ernesto Valverde ayaa ka hadlay dhowr mowduuc oo muhiim ah sida suurtagalnimada uu ku ciyaari karo Lionel Messi oo dhaawac ka soo laabtay, howsha adag ee sugeysa kulanka ay kula ciyaarayaan Borussia garoonka Signal Iduna Park, iyo bandhiga cajiibka ah uu soo sameeyay da’ayarka Ansu Fati.
Haddaba tababare Valverde ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor ciyaarta caawa ayaa wuxuu ku sheegay:
“Borussia Dortmund waa koox aad u wanaagsan, waxaan rajeynayaa inuu noqon doono tartan aad u sareeya”.
Intaas kaddib macalinka reer Spain ayaa wuxuu ka hadlay go’aankiisa kaga aadan ka qeyb qaadashada Lionel Messi ee kulanka caawa, wuxuuna ku jawaabay:
“Waxaan go’aamin doonaa xilliyada soo aadan ka qeyb qaadashadiisa kulankan muhiimka ah, inkastoo Lionel Messi uu si buuxda kaga qeyb qaatay, inta lagu gudi jiray tababarkii ugu dambeeyay ee kooxda”.
Sidoo kale tababare Ernesto Valverde ayaa inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id wuxuu si weyn u amaanay da’ayarka Ansu Fati wuxuuna yiri:
“Waa wax aan caadi aheyn waxa uu sameynayo Ansu Fati, waan ku faraxsanahay isaga, waana u rajeyneynaa inuu sida ugu fiican ku guuleysto mustaqbalka”.